Mpanamboatra PCB Assebmly - PCBFuture
fivorian'ny birao vita pirinty, fivoriana PCB prototype, Mpanamboatra fivoriambe PCB
PCBFuture dia mpamokatra fivoriambe PCB matihanina. Ny orinasanay dia matihanina PCB manamboatra sy serivisy fivoriambe PCB ao Shina. Azontsika atao ny manolotra serivisy turnkey amin'ny PCB manufacturing ka hatramin'ny PCB, ny fitsapana ary ny trano.
PCBFuture dia manome fivoriambe PCBA. Ny orinasantsika SMT matihanina dia manana fitaovana mandroso, toy ny fanontana stencil sokajy eran'izao tontolo izao, fividianana chip SMT sy fametrahana azy, solom-bolo, fitsapana an-tserasera ary famokarana vy harato. Fitsapana AOI sy milina fitiliana taratra X-ray ho an'ny fizahana kalitao.
Inona no atao hoe prototype pcb-assemblage?
Ny fiangonan'ny birao fanaovana pirinty vita pirinty (PCB) dia manana anarana maro. Ny anarana hafa maheno anao matetika dia: prototypes PCB ambony teknolojia (SMT) PCB, fivoriambe prototype PCBA, fivoriambe santionany PCB, sns. Ny teny hoe prototype PCB Assembly dia manondro prototype PCBA haingana ampiasaina hizahana ny asan'ny endrika elektronika vaovao. Manampy amin'ny fiantohana kalitao ireo, manamarina fa tsy misy olana amin'ny vokatra fitsapana, mahita bibikely, ary manavao ny endrika. Matetika, alohan'ny famokarana betsaka, tetikasa elektronika iray dia mila 2-3 iteration ny fivoriambe PCB prototype mba hahazoana antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra.
Maninona no mifidy PCBFuture ho an'ny Fanamboarana PCC sy fivoriambe ?
Orinasa roa tena izy any Shenzhen.
Singa azo antoka, avy amin'ireo mpaninjara singa manana alalana ihany, oh: Arrow, Elektronika ho avy, Digi-key, Mouser ...
Mpiara PCB azo antoka, fiaraha-miasa PCB 15 taona, SGS ...
Fomba fanao mahazatra azo ianteherana.
Serivisy fijanonana tokana, fanamboarana PCB, fivoriambe PCB, fizarana singa ...
PCBFuture dia manohana ireo injeniera hanangona haingana ny prototype elektronika ary handaniam-bola mandritra ny fizotran'ny fanamarinana endrika.
Ny serivisy lehibe ho an'ny fivoriambe PCB:
a. Manamarina ny paty solder
b. Manamarina ireo singa hatramin'ny 0201 "
d. Fanamarinana ireo singa tsy hita, offset, faritra tsy mety, polarity
X-Ray dia manome fanaraha-maso avo lenta amin'ny:
d. Fonosana mizana
d. Birao bare
2. Soldering Wave Elective
Miaraka amin'ny milina fandefasana onja elektronika, PCBFuture dia mahatratra ny kalitao tsy tapaka sy ny fifehezana ny fizotrany rehefa mivory ny birao boribory manana sosona tany sy hery marobe, mpampitohy avo lenta, na singa mahazatra mahazatra A. Ny AOI rehetra dia voasedra alohan'ny QC.IPQC.
3. Coating tsy manara-penitra
Samy misy sosona-dipoara na fanamainana mijidina no misy. Fiarovana ny sosona diélectrika tsy mitarika izay apetraka amin'ny fivorian'ny birao vita pirinty mba hiarovana ny fivorian'ny elektronika amin'ny fahasimbana vokatry ny fandotoana, ny famafazana sira, ny hamandoana, ny holatra, ny vovoka ary ny harafesina ateraky ny tontolo masiaka na mahery vaika. Aorian'ny fampiharana ny sarony dia hita miharihary ho fitaovana mazava sy mamirapiratra izy io.
4. Teknolojia ambonin'ny havoana
PCBFuture vokatra rehetra mifanaraka amin'ny IPC2 fenitra. Miaraka amin'ny traikefa 18 taona nametrahana ny BGA, UBGA, CSP ary ny passive profil kely hatramin'ny 0201, dia manome vahaolana lafo vidy sy avo lenta ho an'ireo takiana SMT izahay.
5.Pin Through-hole Assembly
Ny haben'ny fametrahana horonam-peo sy horonana. Ny haben'ny PCB ambony indrindra dia 40 "x 40". Ny hafainganam-pandeha dia mahatratra 15000 isan'ora, ary ny marina dia mahatratra 99%, izay mampihena ny fahaverezan'ny singa.
Misy vahaolana roa ho an'ny PCBFuture. Dingana fametahana tsy misy firaka sy misy firaka. Ny efitrano vahaolana tsirairay dia mizara ho toerana tsy miankina 2. Ka tsy misy fisafotofotoana.
7.Fanamboarana boaty feno
Ny vahaolana 'Boxed' feno, anisan'izany ny fitantanana ny fitaovana amin'ny singa rehetra, ny faritra elektromekanika, ny plastika, ny casings ary ny fanontana sy ny fonosana.
Amin'ny maha marika malaza indrindra azy, PCBFuture dia handray andraikitra lehibe amin'ny asa aman-draharaha sosialy sy asa aman-draharaha, handray anjara feno amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ary hiezaka ny ho lasa mpanamboatra PCB manerantany.